Voina tany Antsohihy :: Lehilahy maty sempotra tao anaty fiara mpitatitra solika • AoRaha
Vatana mangatsiakana lehilahy iray, valo amby roapolo taona, no nalaina tao anatin’ny daba lehiben’ny fiara fitondrana solika, tao Ambalakida, any an-tampon-tanànan’Antsohihy, omaly maraina. Tsy nisy nahita ny voina nahazo azy.
Fantatra, taorian’ny fizahana rehetra, fa noho ny fahasemporana nahazo azy tao anatin’io fiara io no nitarika ny fahafatesany. Mpanampy ny mpamily mitondra ny fiara fitaomana solika ilay niharamboina. Io mpamily io no nampandre ny mpitandro filaminana, rehefa nahatsikaritra zavatra hafahafa teo amin’ny fiarany.
Nijanona teo an-tsisin’ arabe milahatra niaraka tamin’ny fiara hafa mpitondra solika ilay kamiao. Ny mpamily mpanampy no niandry sy natory tao anaty fiara, tamin’ny alin’ny alatsinainy. Tombanana ho tamin’ny 11 ora alina no nisehoan’ny loza ka nahafaty an’ilay mpamily mpanampy.
« Tonga teo amin’ny kamiao ny mpamily, tamin’ny 5 ora maraina. Gaga izy nahita zavatra hafahafa teo amin’ny fiara. Nisokatra ny hidin’ny fidirana ao amin’ny daba lehibe fitoeran-tsolika. Tazany tao ilay namany efa tsy nihetsika intsony », hoy ny zandary nanao ny angom-baovao.
Nisy niendaka ny hoditra teo amin’ny vatany noho izy efa nilona naharitra tao anatin’ ny daba fitoeran-tsolika. Tsy nahitana ratra hafa na endrika vono kosa ny vatany. Tamin’ny fitsirihana ihany no nahafantarana fa tsy nisy fandrobana na zavatra hafa mifandraika amin’izany tao amin’ny kamiao.
Voina teo am-pangalarana :: Lehilahy matin’ny herinaratra